युवामा किन बढी रहेको छ हृदयघात ? डा. चन्द्रमणिका यस्ता छन् सुझाव | Seto Khabar
नमराज भट्ट / काठमाडौं । पछिल्लो समयमा अव्यवस्थित जीवनशैली र खानपानले धेरैजसो मानिसमा मुटुरोगको समस्या देखिन थालेको छ।
अस्पतालमा आएका (सन् २०१२) बिरामीको हिस्ट्री लिँदा हृदयघात भएर आएका ४९५ मानिसमा ९७ दशमलब ८ प्रतिशतले धुमपान गरेको पाइयो। त्यही कुरालाई सन् २०१८ मा हेर्दा धुमपान गरेका ५७ प्रतिशत मानिसलाई हृदयघात भएको पाइयो।
हृदयघात हुने बिरामीको आयू अमेरिकाको तुलनामा दक्षिण एसियामा १० वर्षले घटिरहेको छ। पहिला–पहिला हामी भन्थौं–४० वर्षमुनिका हृदयघात भएका मानिस अस्पताल आउँदैनन्
सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमनसम्बधी बहुपक्षीय पैरवी बैठकमा वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा‌. चन्द्रमणि अधिकारीले राखेको धारणा
मानिसले चुरोट छाड्नेबित्तिकैका फाइदा
१) २० मिनेटमा ब्लड प्रेसर नर्मल हुन्छ।
२) तीन दिनमा श्वास फेर्न सजिलो अनुभव गर्छ।
३) एक वर्षमा हृदयघात हुने सम्भावना ५० प्रतिशतले कम गर्न सकिन्छ।
४) चुरोट खान छोडेको १० वर्षभित्र हृदयघात हुने सम्भावना चुरोट नखाने मानिससँग बराबर हुन्छ।
५) दुई वर्षमा फोक्सोले गर्ने काम ३० प्रतिशतले राम्रो काम गर्छ।